China Hexadecyl trimethyl ammonium chloride ， CAS No. 112-02-7 ， 1631 orinasa sy mpanamboatra | Kerui Chemicals
Anaran'ny varotra: 1631
Ceteartrimonium Chloride, sira amonium Quaternary 1631
Sira amonium quaternary quationnary 1631
Hexadecyl trimethyl ammonium chloride (1631, Ceteartrimonium Chloride) dia misy fiantraikany amin'ny bakteria, fanoherana ny famonoana;
Hexadecyl trimethyl ammonium chloride (1631, Ceteartrimonium Chloride) dia manana fahalemem-panahy tena tsara ary be mpampiasa amin'ny shampoo, vokatra fikarakarana volo, fanalefahana lamba ary vokatra hafa.
Hexadecyl trimethyl ammonium chloride (1631, Ceteartrimonium Chloride) dia azo ampiasaina ho emulsifiers amin'ny pigment, loko, indostrian'ny asphalt ary indostria hafa.
Hexadecyl trimethyl ammonium chloride (1631, Ceteartrimonium Chloride) dia ampiasaina ho emulsifier hanoherana ny fotaka emulsion ao anaty rano avo lenta ary ampiasaina ihany koa ho toy ny mpiady anti-stick amin'ny indostrian'ny latex rehefa mikaroka lavadrano lalina amin'ny indostrian'ny sehatry ny solika;
Hexadecyl trimethyl ammonium chloride (1631, Ceteartrimonium Chloride) dia manana fiasa mampifindra dingana tsy manam-paharoa ary be mpampiasa amin'ny indostrian'ny simika tsara, ny syntetika amin'ny pharmaceutika ary ny indostria hafa;
Hexadecyl trimethyl ammonium chloride (1631, Ceteartrimonium Chloride) no akora simika eo amin'ny sela syntetika, tsy hifandray amin'ny maso sy ny hoditra, rehefa sendra mifandray, manondraka rano.